प्रिन्सिपलद्वारा कक्षा ७ का विद्यार्थीलाई ‘पनिस्मेन्ट’ : पिँडुलामा सुम्ला, कपाल मुण्डन | नुवागी
-हरिसुन्दर छुकां/भक्तपुर । भक्तपुरको एक संस्थागत विद्यालयका प्रिन्सिपलद्वारा विद्यार्थी कुटिएका छन् ।
सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ९ नंखेलको भातेढिकुरस्थित मदरल्याण्ड इंग्लिस बोर्डिङ सेकेण्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल सञ्जय खड्काबाट सोही विद्यालयको कक्षा ७ मा पढिरहेका सबिन श्रेष्ठ कुटिएका हुन् । प्रिन्सिपल खड्काको कुटाइबाट १४ वर्षीय सबिनको दुबै गोडाको पिँडुलामा सुम्ला उठेको छ । उनी अहिले खुट्टा खोच्याएर हिँड्डुल गर्छन् ।
यो घटना गत कार्तिक २५ गते भएको हो । घटना भएसँगै विद्यार्थी सो विद्यालय नगएपछि घटना बाहिर आएको हो। ‘कार्तिक २५ गते स्कुलका प्रिन्सिपल सरले छोरालाई सुम्लो नै उठ्ने गरी कुटेपछि बाबु स्कुल जान मानेन्, अहिलेसम्म सुम्लो बिसेक भएको छैन ।’ घटना भएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि छोरा सबिनको पिँडुलाको सुम्लो देखाउँदै आमा लक्ष्मी श्रेष्ठले भनिन् ।
उनले अहिले भने सम्झाइबुझाइ गरी आफू बसिरहेको सिपाडोल नजिकैको गणेश माविमा भर्ना गरिदिएको बताइन् । २०७२ सालदेखि सो विद्यालयमा पढाउन थालेकी उनले पहिला पनि सजायँ दिने गरेको आरोप लगाइन्।
सोही विद्यालयका प्रिन्सिपल खड्काले सुरुमा पनिस्मेन्ट नगरेको बताए पनि पछि भने सामान्य रुपमा लठ्ठीले दुईपटक हिर्काएको स्वीकारे । विद्यार्थी सबिनलाई सस्पेन्समा राखिएको बताउँदै उनले सबिनले बद्मासी गरेपछि तर्साउनका लागि लठ्ठी लगाइएको बताए ।
‘पहिला त्यो बच्चाले अरुको घरमा चोरी पनि गरेको थियो, त्यो बेला मैले नै पुलिस रिपोर्ट नगर्न भनेँ, उनलाई लाष्ट वारेन्ट दिइएको थियो, सबिन बद्मासी गथ्र्यो, त्यसो गर्दागर्दै पनि त्यो दिन(घटना भएको दिन) उनले स्कुलमा बारुद पड्काए, ससाना विद्यार्थीहरुलाई असर पर्ने गरी । त्यही कारण पनि उनले पनिस्मेन्ट पाएको हो ।’ प्रिन्सिपल खड्काले भने ।
विद्यार्थी सबिन श्रेष्ठ भन्छन् :
प्रिन्सिपल सरले तिहारको बिदा सकिएको भोलिपल्ट पिट्नुभयो । सरले होमवर्क दिनुभएको रहेछ । होमवर्क दिनुभएको दिन म एब्सेन्ट भएको थिएँ । म बिरामी भएर स्कुल गएको थिइँन। कक्षाका सबजनालाई नि हान्नुभयो, मलाई पनि हान्नुभो ।
उहाँ पढाउनु हुन्नथ्यो, तर एक्स्ट्रा होमवर्क दिनुहुन्थ्यो ।
त्यो दिन मलाई आल्मुनियमको पाइपले हिर्काउनुभयो । त्योभन्दा अगाडि पनि मलाई पनिस्मेन्ट दिनुभयो, कपाल काटेर ।साथी बाहिर हेरेर बसेको रहेछ, मैले पनि हेरेँ । बाहिर सर हुनुहुँदो रहेछ । त्यसलाई चाहिँ हान्नुमात्र भो मलाई चाहिँ हान्नु पनि भो, कपाल पनि काट्दिनुभयो ।
हातमा जति कपाल आउँछ, त्यति काट्दिनुभयो । त्यसपछि प्रिन्सिपल सरले ‘जा, मेरो स्कुलमा पढ्नुपर्दैन’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म चुप लागेर बसेँ ।
के भन्छिन्: आमा लक्ष्मी श्रेष्ठ
त्यो घटना कार्तिक २५ गतेको हो । बाबु हाँस्दै स्कुल गएको थियो । स्कुलको तीन तला माथिको कक्षा, त्यहाँ खापा पनि थिएन, पर्दा मात्र लगाएको थियो । त्यही झ्यालबाट हेर्ने बित्तिक्कै नबोलाइकन झ्याम कि झ्याम हानेर घर जा भनेर हुत्यायो रे । अनि अलि पर हुत्याएपछि फेरि तानेर यो ढोका र त्यो ढोका गरी हुत्याएको हुत्याई गरेको कुरा बाबुले बताउँदा मैले मनै ठाम्न सकिँन । बाबुको कठालो समाएर घरी यता घरी उता गरेको बाबुले बताए । अनि बाबुको कपाल पनि काट्दियो, कपाल भुत्ल्याए । कुकुर तिहारको दिन काटेको कपाल त्यो दिन टाटेपाटे गरी काटिदिए ।
त्यो कुरा मैले बेलुका थाहा पाएँ । स्कुलबाट आउने बितिक्कै सिरकमा गुटुमुटु परेर सुते । बाबु तिमीलाई के भयो भनी सोधेँ, निधार छामेँ, ज्वरो आएको रहेछ । कपाल त नम्बर जस्तै गरी काटेर पाटा मोडिदिएको रहेछ । मैले प्रिन्सिपललाई त्यही बेला फोन गरेँ, फोन उठाउनु भएन । भोलिपल्ट बाबु स्कुल जान मानेन । अनि मैले अन्तै स्कुलमा पठाएँ ।
त्यो घटना भएपछि कोहीले पुलिसलाई रिपोर्ट गरौं भने, कोहीले महिला संघ लिएर जाउँ भने मलाई आँटै आएन । मेरो बच्चालाई चोरको आरोप पनि लगाए ।
अभिभावक लक्ष्मी श्रेष्ठले आफ्नो सन्तानलाई कोही शिक्षक र प्रिन्सिपलबाट कुटाइ खान नभई केही सिक्ला र केही पढ््ला भन्ने अपेक्षाले आफूले खाई नखाई पनि निजी स्कूलमा पढ्न पठाएको बताउँछिन् । कुनै पनि बालबालिका रमाएर, खुसी भएर पढ्न पाउनुपर्ने उनको बालअधिकार पनि हो तर त्यस किसिमको प्रकारको सजायँले बाल मस्तिकमा गहिरो असर गर्ने निश्चित भएकाले बालबालिकालाई कुनै पनि शारिरीक र मानसिक सजायँ दिन नहुने अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए ।
उनले संस्थागत विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड र शिक्षा नियमावलीमासमेत विद्यार्थीलाई सजायँ दिन नपाउने प्रावधान उल्लेख भएको बताउँदै विद्यार्थीले कक्षाकोठामै सजायँ पाउनुलाई बालमैत्री वातावरण नीतिको खिल्ली उडाइएको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘शिक्षा नियमावली २०५९(संसोधनसहित)को परिच्छेद २२ दफा १३३मा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा शिक्षकले विद्यार्थीलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिन नहुने उल्लेख छ ।’
गल्ती गरेका विद्यार्थीलाई परामर्श गरी सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्नेमा सजायँको भागीदार बनाउनु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले अधिकांश संस्थागत विद्यालयमा विभिन्न खालका सजायँ हुने गरेको बताउँदै कति सजायँहरु बाहिर आउने नगरेको बताए ।
One thought on "प्रिन्सिपलद्वारा कक्षा ७ का विद्यार्थीलाई ‘पनिस्मेन्ट’ : पिँडुलामा सुम्ला, कपाल मुण्डन"
tyasari kutne principal, principal hoinana, dravypichas hun. yinlai karbahi garnuparxa.
ब्राइटस्टारको फुटसलमा आयोजक टिम बिजयी